ရင်နှင့်ရင်းသောတစ်ခက်ပန်း.....: နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆုရရှိသူများစာရင်း /* The CSS Code for the menu starts here s2free.blogspot.com */
(၁) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အကောင်းဆုံး တောင်သူလယ် သမားဆုအတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒိုက်ဦးမြို့နယ် သုံးခွကျေးရွာအုပ်စု ပဲနွတ်ကျေးရွာမှ ဦးသိန်းမြင့်၊
(၂) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းရှင်ဆုအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်မှ ပင်လယ်ကိုးသွယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ပိုင်ရှင် ဦးအောင်သန်းဦး၊
(၃) မွေးမြူထုတ်လုပ်မှု အကောင်းဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ်ဆုအတွက် ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံမြို့နယ် နောင်ကုန်ကျေးရွာမှ ဦးကျမော့၊
(၇) နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားစွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံးဆု အတွက် ဆုတံဆိပ် (၅၂) ဆုရှင် မြားပစ် အားကစားမယ် မအောင်ငှိမ်း၊
(၈) အကောင်းဆုံး ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ဆုအတွက် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးမှ Golden Delta Co., Ltd ပိုင်ရှင် ဦးချစ်ခိုင်၊
(၉)တန်ဖိုးမြင့် ထုတ်ကုန် အကောင်းဆုံး ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆုအတွက် နေရှင်နယ် ဝုဒ်အင်ဒက်စတွီ လီမိတက်ပိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်း၊
(၁၀) နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာ တာဝန်အများဆုံး သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းရှင်ဆုအတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ် လီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကိုဝင်း၊
(၁၁)ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု အကောင်းဆုံးအသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆုအတွက် သဇင်နွယ် မိသားစုရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပိုင်ရှင် ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ၊
(၁၂) ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှု အကောင်းဆုံး အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဆုအတွက် သံရည်ကျိုလုပ်ငန်းရှင် ဦးအေးဝင်း၊
(၁၃) အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ် ရရှိကြသည့် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကိုယ်စား ဦးစိန်ဝင်းအောင်နှင့် မေရီချက်ပ်မင်း နားမကြားသော ကလေးများကျောင်း ကိုယ်စား ဦးဒေါ်ညွန့်ညွန့်သိန်း
ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ ကျန်တဲ့တောင်သူတွေကိုလည်း ကျွန်တော့်လို ကြိုးစားချင် လာအောင် စံပြဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြေလွတ်မြေလပ် ဧက ၁ဝဝဝ ကို ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေ ရှင်းလင်းပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တာရယ်၊ အဲဒီဧက ၁ဝဝဝ ကို အဆင့်မြင့် လယ်ယာမြေ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ရယ်၊
နောက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဧက ၂ဝဝဝဝ ကိုလည်း အဆင့်မြင့် လယ်ယာဖြစ်အောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ရယ်၊ ဒါ့အပြင် ဒေသမှာ စပါး၊ ပဲနဲ့ အခြားသီးနှံတွေကို နိုင်ငံတော်က ရည်မှန်းချက်ထားတဲ့ အထွက်နှုန်းမျိုးရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အချက်တွေကြောင့် ထိုက်ထိုက် တန်တန် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရတာလို့ ထင်ပါတယ်''ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းရှင်ဆု ရရှိသည့် ဦးအောင်သန်းဦး ကလည်း ''နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ချီးမြှင့်တဲ့ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆု ရရှိတာ အင်မတန်မှ ဝမ်းသာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ တောင်သူတွေကို နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးပြုတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ အခုလို အားပေးချီးမြှောက်တာ အားလုံးက ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့တော့ လယ်ယာကဏ္ဍ၊ စပါးကဏ္ဍကို အဓိက တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဆန်စပါးကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှ နိုင်ငံခြားတင်ပို့ ရောင်းချရသည်အထိ Supply Chain တစ်ခု လုံးကို ဆောင်ရွက်တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက အထူးစပ်မျိုးစပါးတွေ၊ မျိုးစေ့ထုတ်တယ်၊ ပြီးရင် မျိုးကောင်း မျိုးသန့်တွေကိုလည်းပဲ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တယ်။ ပြီးရင် ခေတ်မီဆန်စက်ကြီးတွေနဲ့ ကြိတ်ခွဲတယ်။
ရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့တာကိုလည်း ရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့စက်တွေနဲ့ ရိတ်သိမ်းတယ်၊ စက်မှုလယ်ယာကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဆန်စပါးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါး ညီလာခံမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ပေါ်ဆန်းမွှေးကို ပထမရအောင် လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အခုလို ဂုဏ်ပြုဆု ချီးမြှင့်ခြင်းခံရတယ်လို့ မှတ်ယူပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ကတော့ တောင်သူတွေ စီးပွားရေးဘဝ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေဖို့ အတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်သုံးစွဲတတ်အောင်၊ ဝင်ငွေတိုးတက်အောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပံ့ပိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒီလို ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ တောင်သူတွေကို မျိုးစေ့၊ စိုက်စရိတ်၊ သွင်းအားစု ဒါတွေကို ပံ့ပိုးပြီးတော့ ဒီလိုပံ့ပိုးတဲ့ နေရာမှာလည်း လူတွေဆီက အတိုးမယူဘဲနဲ့ ငွေကြေး ပံ့ပိုးပေးတယ်။
ပြီးရင် သီးနှံကို ဈေးကောင်းလည်းပေးဝယ်ပြီး တောင်သူတွေရဲ့ဘဝ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဆန်စပါးအထူးပြု ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ဆန်စပါးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ ရည်မှန်းချက်တွေ အများကြီး ထားပါတယ်'' ဟု ပြောပြခဲ့သည်။
Posted by www.minminthor.blogspot.com at 6:10 AM
ကာမ ဆက်ဆံ နေစဉ် အတွင်း လျှို့ ဝှက် ကင်မရာ ဖြစ် မှတ်တမ်း တင် ခံ ရ ပြီး နောက် လူသိ များ သွား သည့် ဗီဒီယို ကြောင့် မြန်မာ အမျိုး သမီး များ အတ...
ဘ၀နှင့်ရင်း၍ ရခဲ့သော သင်္ခန်းစာ ( ဖတ်သင့်သည့် ၀တ္ထုတို )
မိုးကဆွေနေသည်မှာ ငါးရက်ပင်ရှိနေချေပြီ။ တောတောင်များ ထူထပ်၍လော၊ ပင်လယ်နှင့်နီးသောကြောင့်လေမသိ။ ယခုချိန်ထိ မိုးကမရပ်သေး။ မှန်သည်။ မိုးက ရ...
website လေးမှာတော. flash သီချင်းများကို နားဆင်နိူင်ပြီး flash songs လုပ်နည်း နှင်.တကွ software များကိုလည်း စုံလင်စွာ တင်ပေးထားပါတယ်။ flash ...
Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ် Links များ
ဘာသာပြန်စာအုပ်များ http://is.gd/n4j7eL သမိုင်းစာအုပ်များ http://is.gd/B1PIZQ မြန်မာစွယ်စုံကျမ်း၊စာပေကျမ်း၊စာတမ်း၊ကျောက်စာစာအုပ်များ http:/...
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်သွားမယ်
http://4.bp.blogspot.com/-mbPYUtiwrvs/UYxUoomNJCI/AAAAAAAAo-Y/0mJFusVMwoA/s320/images.jpgမြန်မာအစိုးရနဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတေ...
ပထမဆုံး မြန်မာအမျိုးသမီး ပါဝင်သော အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင် ,သီရိလင်္ကာတွင်ရိုက်ကူးသည် , ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်စကြာ၏ဇနီး ဒေါ်ဝင်းမင်းသန်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောThe Purple Plain ရုပ်ရှင်ဇတ်ကား link
http://www.youtube.com/watch?v=KBO_jXjFn30 http://www.youtube.com/watch?v=Z1vDfFNdvos http://www.youtube.com/watch?v=E6CQS9tDIoA http://...
The King Maker | THIT HTOO LWIN
ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: ပီမိုးနင်း - မိန်းမစိတ် ကျမ်း စာအုပ် (Ebook)
ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: ပီမိုးနင်း - မိန်းမစိတ် ကျမ်း စာအုပ် (Ebook) : ပီမိုးနင်း - မိန်းမစိတ်ကျမ်း စာအုပ်လေးပါ။ ဖတ်ချင်၊ လေ့လာချင်၊ စူးစမ်းခ...
Fast and Furious6(2013) - Xesion Tube
ယနေ့ မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ...
စိတ်အတွေးခဏပေမဲ့ ရက်ရောကာပွင့်မဖူးသေးတဲ့ ဝါရွှေရောင်ပန်းပိတောက် ငါမခူးဖြစ်တာကြာပြီမေ
ပါဂျောင်လူသတ်ကုန်းမှ ပဲ့တင်သံများ (အပိုင်း - ၄) ~ Myanmar Express
မောင်စေတနာ: ကိုယ်ပိုင် home page လုပ်ရအောင်
အံ့သြဖွယ် ထူးဆန်းတဲ့ ရေကန်
ကမ္ဘာ့သြဇာအလွှမ်းမိုးဆုံး ပီသစွာဖြင့် Wikipedia အွန်...
MY MUSIC THOR (playlist)
တရုတ်နိုင်ငံတွင် မြန်မာငွေစက္ကူအတုများ ထုတ်လုပ်မှု K...
မြန်မာ ဘလော့ဂ် ၀က်ဘ်ဆိုက်များ
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အမေရိကခရီးစဉ်တွင် Google ဥက္ကဋ္ဌနှင့်...
"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့...
" မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်ကို ဖျက်ဆီးနေကြသူများ"
ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင...
ဇေယျာသော်ရဲ့ ပါရီ မိန့်ခွန်း - MYANMAR LOCAL NEWS
ဇေယျာသော်ရဲ့ ပါရီ မိန့်ခွန်း
မြိတ်မြို့နယ်၊ ကလွင် ကျေးရွာ အုပ်စု၊ NLD ရပ်/ကျေးရ...
ဒါကို ကြည့်ကြပါအုံး ဗျာ လူမျိုး ဘာသာမခွဲခြား မြန်မ...
ဖားကန့်မြို့က ပိဋကတစ်ပုံဆောင် ရဟန်းတစ်ပါးထွက်ပြီ.
ဟံသာဝတီမင်းနေပြည်တော်ကြီး ပျက်သုဉ်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတ...
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာ ဟက်ကာတွေရဲ့ အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်နေပ...
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ချားရဟတ် ဆွီဒင်၌ဖွင့်လှစ်
ဆံပင်မွှေးဖြင့် အလင်းပေးသူ ဆယ်ကျော်သက် နီပေါနိုင်ငံ...
သီရိလင်္ကာတွင် မဟာစင် ဆိုင်ကလုန်း ဝင်ရောက် (၇)ဦးသေဆု...
ပြည်မြို့တွင် ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးအား လူတစ်စု ကျောင်...
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဈေးကြီး အကြီးစား ပြင်ဆင်မည်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘန်ကောက်-ရန်ကုန် ခရီးစဉ်မဟုတ်သော...
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အကြိမ် အသည်းအစားထိုးကုသ
THOR,FC FRIENDS 4
၈၈ အရေးအခင်း ပုံရိပ်တွေနဲ့ ဇာတ်ကား ၂၀၁၅ ရုံတင်မည် ...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ကိုးကွယ်နေကြသော ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟ...
Titagu said not to believe rumours - DVB 29.03.201...
youtube . Picture Window theme. Powered by Blogger.